Qaphela lokhu uma usuthatha imali yakho yempesheni | Isolezwe
Qaphela lokhu uma usuthatha imali yakho yempesheni
Izindaba / 6 December 2017, 2:19pm / Intatheli yeSolezwe
Umbuzo: Ekupheleni kukaDisemba 2017 ngizobe ngithatha umhlalaphansi ekubeni isisebenzi sikahulumeni. Ngingakhetha ukuthi ngikhethe ukuthatha isamba semali elinganiselwa ku-R1.2 million bese ngihola impesheni yanyanga zonke elinganiselwa ku-R 27 414 impilo yami yonke, noma ngesule emsebenzini ngithole imali elinganiselwa ku- R5 million?
Inkinga ngokukhetha uhlelo lwe-annuity ngukuthi uma ngidlula emhlabeni, imali ezoholwa ngunkosikazi wami izoba ingxenye yemali ebengizobe ngiyihola ngisaphila kanti uma unkosikazi wami edlula emhlabeni impesheni iyama ukukhokha bese izingane zethu zingatholi lutho. Umbuzo wami uthi: Uma ngesula emsebenzini, ngithathe le mali engu- R5 million, ngingakwazi ukuhola imali yanyanga zonke elingana nale ebengizoyihola esikhwameni sempesheni elinganiselwa ku-R27 000 ngiphinde ngithole umhlomulo ka-R1.2 million uma ngiyitshala le mali?
Impendulo: Akesibheke lezi zinhlelo ezimbili ezibalulwe umfundi:
Ukuthola umhlomulo we-annuity impilo yakho yonke
Umfundi uzothola i-annuity impilo yakhe yonke, eqala ku-R27 414 ngenyanga. Uma edlula emhlabeni, unkosikazi wakhe uzoqhubeka nokuhola u-50% we-annuity impilo yakhe yonke.
Ukukhuphuka kwempesheni kuyaye kuvunywe iGEPF minyaka yonke kepha lokhu kulele esimeni sokwehla nokwenyuka kwamandla erandi. Umfundi uvumelekile ukuthi athathe isamba sika-R1.2 million. Uma enza njalo i-GEPF ibheka ubungozi botshalomali. Ngamanye amazwi, ilunga lizoqhubeka nokuhola impesheni noma ngabe senza kanjani isikhwama sempesheni.
I-GEPF iphinde ibheke ubungozi bokuthi ilunga nonkosikazi walo baphile iminyaka engaphezulu kwelindelekile. Masingenza isibonelo; uma bephila baze babe neminyaka ewu-120, bazoqhubeka nokuhola impesheni. Ngakolunye uhlangothi, uma bedlula emhlabeni esanda kuya empeshenini, ngeke iGEPF isakhokha okusho ukuthi izingane zabo ngeke zithole isamba semali noma iholo.
Uma ethatha isamba semali asifake kutshalomali
Umfundi uthi ubezothola imali elinganiselwa ku-R5 million uma esula emsebenzini. Umthelela wentela awubalwanga kulesi samba njengoba inani lentela lishintsha kumuntu nomuntu.
Akesithi nje le mali izotshalwa kwi-living annuity ukuze kube nemali yempesheni ephumayo. Kulesi sibonelo, isamba semali sifakwa kutshalomali ukuze kube nohlelo lwempesheni uma imali isekhona.
Uma ekhipha imali, intengo yotshalomali iyehla, uma eyifaka kutshalomali iyakhula, umfundi angayikhipha njengempesheni yakhe.
Kubalulekile ukuqonda ukuthi utshalomali luba sebungozini kanye nobungozi bokuthi uzophila isikhathi esingakanani. Ukungenzi kahle kotshalomali kuzoba nomthelela kwimali angakwazi ukuyikhipha. Kanti uma imali iphela umtshalimali esaphila, ngeke esakwazi ukuthola impesheni. Kodwa uma eshona imali esele ingakhokhelwa unkosikazi noma abantwana bakhe.
Akesiqhathanise izinhlelo zombili
Umfundi ukuze akwazi ukuhola impesheni uwu- R27 414 ngenyanga kwi-GEPF, bazodinga ukuthi bakhiphe * -6.52% ngonyaka kwi- living annuity yakhe.
Akesithi nje imali izokhula ngo-10% ngonyaka kanti umfundi lulindele ukuthi impesheni yakhe ngonyaka ikhule ngokwe-inflation mhlawumbe ka-6% ngonyaka. Phansi kwale simo, utshalomali luzokhula esikhwameni, ludlule impesheni ayiholayo cishe iminyaka eyisishiyagalolunye. Emuva kwalokho imali izoqala yehle igcine ngokuphela eminyakeni ewu-22.
Uma ngabe isikhwama sikhula ngaphansi kuka-10%, le mali ingaphela ngokukhulu ukushesha. Emuva kwalokho, ngeke isababikho impesheni, lokhu kuveza ubungozi botshalomali kanye nesikhathi esizophilwa umtshalimali.
Nazi izinto okumele uzibheke uma usesimeni esifana nesomfundi wethu:
* Ukuqonda izindleko zokuphila uma ususempeshenini.
* Izindleko zentela ezinhlelweni ezahlukahlukene.
* Ukuthola ulwazi nezeluleko ezizokusiza uthathe izinqumo zotshalomali ezizokulethela inzuzo eyanele.
* Ukuqondisisa isimo sempilo kanye nokuthi ungahle uphile isikhathi eside kangakanani.
* Kumele uqondisise ukuthi ufuna utshalomali lwakho lukwenzeleni. Uhlelo lwe-living annuity lwenza kubelula ukuthi izingane zakho zihlomule noma usudlulile emhlabeni, inqobo uma kunemali esikhwameni sotshalomali.